राप्ती प्रतिष्ठानमा अप्रेसन गर्न अत्याधुनिक ओटी सहित २५ बेडको प्राइभेट वार्ड - माडी खबर
२२ मङ्सिर २०७८, बुधवार
राप्ती प्रतिष्ठानमा अप्रेसन गर्न अत्याधुनिक ओटी सहित २५ बेडको प्राइभेट वार्ड
माडी खबर calendar_today २९ कार्तिक २०७८, 6:04 am
कार्तिक । दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा साना तथा ठुला अप्रेसन गर्नका लागि चार वटा नयाँ अत्याधुनिक ओटी रुम सन्चालनमा आएको छ ।
बिगतमा सामान्य र जटिल अप्रेसन गर्नका लागि ओटि रुम २ वटा हुँदा पालैपालो सबै विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले गर्नु पर्ने अबस्था रहेकोमा अहिले थप ४ वटा नयाँ ओटि सन्चालनमा ल्याएर सेवा बिस्तार गरिएको हो ।
नयाँ ओटिबाट आइतबारदेखि बिरामिको अप्रेसन गर्न सुरु गरिएको छ । नयाँ ओटि सन्चालनमा आएसंगै बिरामीहरुको उपचारमा थप सहजता आएको प्रतीष्ठानकी अस्पताल निर्देशक डा. प्रज्ञा बस्नेतले बताउनु भयो । नयाँ ओटिमा अप्रेसनका लागि नयाँ-नयाँ अत्याधुनिक उपकरणको र थप विशेषज्ञ चिकित्सकको ब्यबस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
त्यसैगरेर आइतबारदेखि नै २५ बेडको प्राइभेट वार्ड सञ्चालनमा आएको अस्पताल निर्देशक डा. बस्नेतले बताउनु भयो । बिस्तारीत स्वास्थ्य सेवा(EHS) सेवालाई प्रभाबकारी बनाउनु साथै बिरामिलाइ छिटाे छरितो सेवा प्रदान गर्न प्राइभेट वार्डले सहयोग पुर्याउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर प्रतिष्ठानले सुबिधा सम्पन्न प्राइभेट वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस वार्डमा बिरामीका लागि छुट्टाछुट्टै क्याबिन बेड राखिएको छ ।
एसी सुविधा, प्रत्येक बेडका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, अपाङ्गमैत्री शौचालय, लिफ्टबाट क्वाबिनसम्म जाने व्यवस्था, डाक्टर र स्वास्थकर्मीको चाैबिसै घण्टा उपलब्धतासहितको व्यवस्थासहित सेवा सुरु गरिएको निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्राइभेट वार्ड सेवा दाङका लागि पहिलो र नवीनतम सेवा भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानमा प्राइभेट बेडसहित राप्ती स्वास्थ विज्ञानमा अब १ सय ७५ बेड सञ्चालनमा आएको छ ।
सिटी स्क्यान सेवा, आधुनिक ल्याब सेवा, अक्सिजन प्लान जडान, विभिन्न विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरी उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कम भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
उत्सर्ग संगित अवार्ड २०७८ कार्यक्रमका केही झलकहरु
लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनको तयारी तिब्र पार्दै माओवादी केन्द्र
भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत सवार हेलिकप्टर दुर्घटना,…
भत्केको विद्यालय बनेन, तीन महिनादेखि खुला आकाशमै पठनपाठन
लुम्बिनीमा ६ वटा क्षेत्रलाई सांस्कृतिक ग्राम बनाइँदै, ५ हजारले रोजगारी…
लुम्बिनी प्रदेशबाट थप
राेल्पामा एक घरमा आगलागी हुदा १५ लाख बराबरको क्षति
ग्राहकको मन जितेको तुलसिपुरको ‘मट्का घर’
माडी खबर calendar_today २२ मङ्सिर २०७८, 12:58 pm
दाङ । दाङको घोराहीमा भैरहेको उत्सर्ग संगित अवार्ड २०७८ मा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र कार्यक्रम संयोजक केएल पिडितबाट नेपाली गित संगितका लागी बिभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुराएका विभिन्न व्यक्तिहरु सम्मानित हुदै ।
माडी खबर calendar_today २२ मङ्सिर २०७८, 12:50 pm
दाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रथम सम्मेलन दाङको भालुवाङमा हुने भएको छ । सम्मेलनको तयारी तिब्र पारिएको सम्मेलन प्रचार प्रसार समितिका संयोजक जीवन गौतमले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ५ सदस्यीय कमिटीमा एक सय ९ ओटै स्थानीय तहबाट भौगोलिक उपस्थिति हुने भएको छ ।
जिल्ला संरचना खारेज भइसकेकाले माओवादीले पालिकाहरूलाई कार्यकारी बनाएको छ । अब पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय समिति कार्यकारी रहने छन् । जिल्लामा भने पालिकाहरूलाई समन्वय गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समिति बनाइने छ । पालिकाहरूको सम्बन्ध अव सिधै प्रदेश कमिटीसँग जोडिने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन प्रचार प्रसार उप समितिका संयोजक जीवन गौतमले जानकारी दिए ।
गौतमका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय ९ जना भूगोलबाट सदस्य छानिने छन् । बाँकी ७६ जना खुल्ला सदस्यहरू छानिनुपर्ने छ । कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
जस अनुसार लुम्बिनी प्रदेश कमिटीमा ७० जना अनिवार्य महिला सहभागिता हुने छ । त्यसैगरी १५ प्रतिशत अर्थात ३० जना दलितको सहभागिता हुने छ । मुस्लिमको सहभागिता ५ प्रतिशत अर्थात १० जना हुने छन् ।
माओवादी प्रदेश कमिटी पनि बहुपदीय हुने छ । अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, सचिव १, सहसचिव १ र कोषाध्यक्ष १ गरी सात सदस्यीय पदाधिकारी हुने छन् । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि उपमहानगरपालिकाबाट अनिवार्य तीन जना र नगर तथा गाउँपालिकाबाट दुईदुई जना प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ । अरु प्रतिनिधि सदस्य सङ्ख्याको आधारमा व्यवस्था गरिएको गौतमले जानकारी दिनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीको कुल पार्टी सदस्य संख्या एक लाख १२ हजार रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ ओटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी दाङ जिल्लामा रहेको छ । दाङ जिल्लामा रहेका १० ओटा स्थानीय तहमा कुल १९ हजार ७ सय पार्टी सदस्य संख्या रहेको छ । माओवादीले यही मंसिर २५ र २६ गते प्रदेश सम्मेलन गर्दै छ । माओवादीले एक पद एक व्यक्तिको अवधारणा अघि सारेको छ । पार्टीको विधान अनुसार अब प्रदेश कमिटीमा रहने कुनै पनि नेता केन्द्रीय समितिमा रहन पाउने छैनन् । अहिले केन्द्रीय सदस्यहरू नै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी रहेका छन् । अब उनीहरूले कि त केन्द्रीय कमिटी छाड्नुपर्ने छ । कि त प्रदेश कमिटी छाड्नुपर्ने छ ।
भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत सवार हेलिकप्टर दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु
माडी खबर calendar_today २२ मङ्सिर २०७८, 9:51 am
काठमाडाैं । भारतको तलिमनाडुको कुन्नुरको जंगलमा बुधबार सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । घना जंगलमा भएको दुर्घटनापछि हेलिकप्टरमा आगलागी भएको थियो । यसमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेनाका १४ अफिसर सवार थिए ।
हालसम्म ४ जनाको शव बरामद भएको छ । शव नराम्रोसँग जलेको अवस्थामा भेटिएको छ । तीन जना घाइतेलाई अस्पताल लगिएको डीडी न्युजलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले भनेको छ । रावतलाई भने गम्भीर हालतमा वेलिङटन सैन्य अस्पताल लगिएको बताइएको छ । उनको स्थितिबारे थप जानकारी दिइएको छैन ।
अल इन्डिया रेडियोका अनुसार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले घटनाबारे संसद्लाई जानकारी दिनेछन् । रावत सन् २०२० जनवरी १ मा देशको पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्त भएका थिए । वायु सेनाले घटनाको कारण पत्ता लगाउन जाँचको आदेश दिएको छ ।
माडी खबर calendar_today २२ मङ्सिर २०७८, 9:32 am
सुर्खेत । भनिन्छ विद्यालय विद्यार्थीको दोस्रो घर हो । शिक्षा मानिसको तेस्रो आँखा हो । नीति निर्माण तहदेखि देशको शासन प्रशासन चलाउन शिक्षा नै आवश्यक पर्छ ।
शिक्षाविनाको मानिस ‘अन्धो’ कहलाउँछ । शिक्षाले नै बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराइ सत्मार्गतर्फ उन्मुख गराउँछ । तर, कर्णालीको विकट बस्तीका बालबालिका शिक्षा आर्जन गर्ने थलो विद्यालय अभावमा अन्धकारमा बाँचिरहेका छन् ।
यहाँका कतिपय स्थानमा विद्यालय भवन अभावले विद्यार्थीहरू चौरमा बस्न बाध्य छन् । कही बालबालिकाले शिक्षकको मुख नै देख्न पाउँदैनन् । अझ भनौँ दुर दराजका विद्यार्थी त्यो अन्धकारबाट बाहिर निस्कन सकेको छैनन् ।
ज्ञानको ज्योतिमार्फत बाहिरी दुनियाँमा रमाउन खोजे पनि उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण उपलब्ध छैन । यही कारण कतिपयले बिचैमा पढ्न छोड्छन् । विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि जुन वातावरण हुनुपर्थ्यो त्यो नहुँदा बिचैमा पढाइ छोड्ने विद्यालय जान नमान्ने जस्ता समस्याले उनीहरूको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिँदै गएको छ । यसको प्रतिनिधिमुलक उदहारण हो दैलेखको चामुण्डाविन्दासैनी नगरपालिका-५ बस्ताकोटस्थित जनता माध्यामिक विद्यालय ।
त्यहाँ न त विद्यालय भवन छ न त पढ्ने वातावरण नै छ । २०४० सालमा स्थानीय स्रोतसाधनबाट निर्माण भएको यो विद्यालयको भवन भति्कदा न त नयाँ भवन निर्माण भयो, न भत्केको भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छ ।
स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म भवन बनाउने योजना नपरेको सोही विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएको शिक्षक रामशरण रेग्मी बताउँछन् । ‘भवन भत्किने अवस्थामा थियो,’ उनले भने, ‘पटक पटक नगरपालिकासँग पनि अनुरोध गर्यौ तर केही भएन । ८ भदौ ०७८ मा परेको अविरल वर्षाले भवन भत्कियो । अहिलेसम्म पुननिर्माणमा कसैले चासो देखाएका छैनन् । भवन नहुँदा विद्यार्थीलाई खुल्ला आकाशमुनि पढाउन बाध्य छौँ ।’
हावा चले विद्यालय बन्द हुन्छ
८ भदौ ०७८ मा परेको अविरल वर्षाका कारण भवन भत्किएपछि हावा चलेपछि विद्यालय बन्ध गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जनक कार्की बताउँछन् ।
‘भवन भत्किएको छ हावा चल्यो, पानी पर्यो भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग अरू भवन छैनन् । खुला आकाशमुनि पढाउनु पर्ने बाध्यता छ । हावा लाग्दा पानी पर्दा विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन । जसले गर्दा विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।’
विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतिर
विद्यालय अध्यन अध्यापन गराउने थलो हो । तर, विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनुको साटो विद्यालय राजनीतिको अखडा बनिरहेको एक स्थानीयको भनाइ छ । यहाँ शिक्षकभन्दा धेरै राजनीतिक दलका नेता रहेको उनी बताउँछन् ।
५ नम्बर वडामा कांग्रेसले जितेको वडा हो । नगरपालिकाको तेतृत्व एमालेले गरीरहेको छ । जसले गर्दा पत्यक्ष रुपमा विद्यालय राजनीति चपेटामा परेको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।
‘भवन निर्माणको लागि पटक पटक नगरपालिका, वडा कार्यालयमा धायौँ । सोही अनुसार आश्वासन पनि पायौँ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकालगायत सरोकारवालाहरूले हुन्छ हुन्छ मात्रै भने । भवन नहुँदा चौरमै पढाउन बाध्य छौँ ।’ ८ भदौ ०७८ को अविरल वर्षातले क्षति पुगेको विद्यालय भवन निर्माणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जनक कार्की बताउँछन् ।
उनका अनुसार ३८ वर्षअघि स्थापना भएको विद्यालयमा अहिलेसम्म भवन निर्माणमा कुनै योजना परेको छैन । ‘स्थानीय सरकार आएको चारवर्ष बित्न लाग्यो तर, नगरपालिकाबाट कुनै आशा भएन,’ उनले भने, ‘२०४० सालमा स्थानीय स्रोतसाधनमा भवन निर्माण भयो तर अहिलेसम्म कसैले सहयोग गरेन । भवनका लागि सबै ठाउँमा हारगुहार गरेपनि कसैले सुनेनन् ।’
जनता माध्यामिक विद्यालयमा दुई सय २४ जना विद्यार्थी छन् । एक जना बालविकास सहजकर्ता, एक जना राहत शिक्षक, एक अस्थाई र चार जना स्थाई शिक्षक रहेको प्रधानाध्यापक कार्कीको भनाइ छ ।
विद्यालय भवन निर्माण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रदेशमा भवन माग गर्न वडा कार्यालयमा जादा वडाअध्यक्षले सिफारिस गर्न नमानेको उनी बताउँछन् । – न्युज कारखानाबाट
माडी खबर डट कम
माडी गाउँपालिका ५ भावाङ, राेल्पा
Copyright 2018. All right reserved. Made with in Nepal by Techinfonepal